Welcome to Pro Car Beauty Saloon Ltd, Myanmar
Ph : (+95) 09 4211 41817 (+95) 09 4211 41828
Hyper Coat Pro
ကားလောက ဖုတ်ကြွေသုတ် နယ်ပယ်မှာ DuPont ဟာ ကမ ္ဘာ မှာ နာမည်ကြီး တည်ထွင်သူဖြစ်တယ်။ DuPont ဆိုတာ သိပ္ပံဆေးအမျိုးမျိုးရဲ့ တည်ထွင်သူဖြစ်တယ်။ ဥပမာ DuPont ရဲ့တည်ထွင်မှုတိုင်းက ဆန်းပြားတဲ့သိပ္ပံကို ထပ်ခါ ပေါ်ပေါက်စေခဲ့တယ်။ Hyper Coat pro ဟာ PuPont ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ကြွေသုတ်ဆေး အထူးခေတ်မီ သိပ္ပံကာကွယ်မြှေး ဖြစ်တယ်။ မှန်နဲ့ ပိုလီတက်ထရာ ဖလူအိုရိုအီလီသင် တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ခိုင်မာတဲ့ စပလိမ်ဓာတ်ပါတဲ့ဖွဲ့စည်းသောအလွှာဖြစ်တယ်။ မှန်ဓာတ် ၊ ကီတုန်း ၊ သစ်ပင်ဆီ ၊ ဓါတ်ပြောင်းပုံဆီလီကွန် စသောပိုလီတက်ထရာဖလူအိုရို အီသီလင်နှင့်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ်သော ဒြပ်ပစ္စည်းလိမ်းဆေးဖြစ်တယ်။ ကားချစ်သူတွေအဖို့ အဆင့်မြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေး တလွှာတိုးလာတာပေါ့။
SUPER A+ CLASS
ထိပ်တန်းထန်းပင်ဖြူ (kit) ဖယောင်းသန်
Super A+ Class ထိပ်တန်းအဆင့် ထန်းပင်ဖြူ (kit) ဖယောင်းသန့်ဟာ သီးသန့်အဆင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆေး
(x –coat) ဖြင့်ပေါင်းစပ်သော သလင်းမြှေးဖြစ်သည်။
ကမ ္ဘာ့အဆင့်အမြင့်ဆုံး သန့်စင်သောထန်းပင်ဖြူ (kit) ကိုသုံးထားပြီး ရေရှည်အသုံးပြုလျှင် သင်ချစ်သောကားကို အလင်းရောင်တောက်ပစေပြီး အက်ဆစ်မိုးကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိမည်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ချောမွေ့မှုနဲ့ စူပါတောက်ပသော မြှေးရာ ၊ ခြစ်ရာများကို အနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေ၏။
Copyright © 2018 Pro Car Beauty Saloon. All Rights Reserved. Developed by Orientwebs.com.